အလိုအလျောက်တံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:50Hz-60Hz Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို,Servo မော်တော်နှင့်၎င်း၏ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို,50HZ 60HZ Servo မော်တော်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို > အလိုအလျောက်တံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
1. Precision: စနစ်အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့, ဒီရှည်လျားလည်ပတ်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း overshooting တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်
2.Stability: စနစ်ပြည်တွင်းရေးဝါယာကြိုးရိုးရှင်းဖို့နဲ့ဝါယာကြိုးများနှင့် terminal ကိုဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်ချွတ်ယွင်းအကြောင်းမရှိတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းအယူအဆအသုံးချ
4. ချောမွေ့: အလိမ်အား servo စနစ်သည်ချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်လျော့နည်းမြန်နှုန်းစညျးမဉျြးဥပအလိုအလျောက်ဝန်မှလိမ်အားကိုထိန်းညှိ, နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှု S ကိုမြန်နှုန်းကွေး mode ကိုခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်။
5. စိတ်တိုင်းကျလုပ်: တစ်ဦးချင်းစီကို system ရဲ့ operating ထိန်းချုပ်မှုအမိန့်များနှင့် mode ကိုထုံးစံ max ကိုလည်ပတ်မှုအခွအေနေစေရန်, တစ်ဦးချင်းစီတံခါးကိုကိုက်ညီစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်သည်တစ်မူထူးခြားတဲ့အမိန့်နှင့်ပိုပြီးမှတ်ဥာဏ် mode ကိုတသော့ချက် mode ကို recover ရှိပါတယ်။
6. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး: အရေးပေါ်ရပ်တန့် signal ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတည်ဆောက်ထားပြီးအဆိုပါစနစ်, မော်တာပြီးနောက်အများဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်, အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိ 30, millsecond အတွင်း ativated နိုင်ပါသည်။
7. အမြင့်အသုံးပြုမှု: စနစ်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုကိုက်ညီမှညင်သာပျော့ပျောင်းသည်, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်းရန်မြန်နှုန်းမြင့်ကျမ်းပိုဒ်လမ်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
8. စွမ်းအင်ထိရောက်မှု: ရှားပါးမြေကြီးတပြင်အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous motor ကိုရှားပါးမြေကြီးတပြင် PMSM'S ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Overload အဆိုပါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာထက်နှစ်ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားများမှာ utinizes လည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာမှနှိုင်းယှဉ်, ရှားပါးမြေကြီးတပြင် PMSM ပိုပြီးစွမ်းအင်ထိရောက်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးနှေးကွေးအပူနှုန်းမှာရှိပါတယ် နှင့်ပိုကြီး torque ။
ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
သုံးအဆင့် AC အ induction motor / High Speed ​​ကြိတ်စက်တံခါးဂျာမဏီချုပ်မော်တော် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
220V 50Hz မြန် Shutter တံခါး SEJ မော်တော် / High Speed ​​အော်ပရေတာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာရှောင်ခြင်းတံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်တံခါး Servo မော်တော် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Servo မော်တော်အတူ controller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Servo မော်တော်အတူအလိုအလျောက်တံခါးထိန်းချုပ်ရေး Box ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးသည် 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
50Hz-60Hz Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို Servo မော်တော်နှင့်၎င်း၏ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို 50HZ 60HZ Servo မော်တော်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို Servo မော်တော်ပြီးတော့ Hofic ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် Servo မော်တော်ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို Servo မော်တော်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု